Nepal Auto गाडी कतै सर्भिसिङ गर्नु छ ? निषेधाज्ञामा पनि कम्पनीहरुले दिदैछन् इमर्जेन्सी सर्भिस - Nepal Auto
गाडी कतै सर्भिसिङ गर्नु छ ? निषेधाज्ञामा पनि कम्पनीहरुले दिदैछन् इमर्जेन्सी सर्भिस
काठमाडौं – निषेधाज्ञाको समयमा थोरै गाडी चलेका छन् । यो अवस्थामा सामान्य अवस्थामा जस्तो धेरै सवारी साधनमा समस्या नआए पनि थोरै संख्यामा भए पनि समस्या आउन सक्छ । त्यसैगरी अन्य अवस्थामा जस्तै सर्भिसिङको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ । यही कुरालाई मनन गरी धेरै सवारी साधन आयातकर्ता कम्पनीहरुले इमर्जेन्सी सर्भिसिङ र अन्य सेवाका लागि आफूहरुले सेवा उपलब्ध गराउने बताइरहेका छन् ।
हुन्डाईको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालिले हटलाइन सेवा ल्याएको छ । हालको अवस्थामा समेत हुन्डाईका सवारी चालकहरुलाई आपतकालीन सेवा प्रदान गर्नका लागि यो सेवा ल्याइएको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले जनाएको छ ।
हुन्डाईले हाल काठमाडौं उपत्यकाका लागि दुई वटा मोबाइल नम्बर उपलब्ध गराएको छ र आवश्यकता अनुसार सो नम्बरमा कल गरेर सेवा लिन अनुरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी टाटा गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले यो आपतकालीन समयमा पनि कुनै पनि ठाउँमा गाडी मर्मत, पार्टपुर्जा, इन्जिन आयल वा ब्याट्री सम्बन्धी सेवा चाहिएमा २४ घण्टा नै सेवामा आफूहरु तयार रहेको जनाएको छ ।
ड्याटसन गाडीको मर्मतका लागि ड्याटसन इमर्जेन्सी सर्भिसिङ उपलब्ध हुने कम्पनीको भनाइ छ । विशेष गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरु र सरकारी वा अन्य कर्मचारीहरुका लागि यो सुविधा उपलब्ध गराइएको र यसका लागि एउटा नम्बर उपलब्ध गराइएको छ ।
अशोक लेल्यान्ड र अन्य विभिन्न ब्रान्डका गाडी उपलब्ध गराइरहेको आईएमई अटोमोटिभ्सले पनि यस्तै प्रकारले सर्भिसिङ उपलब्ध गराउनका लागि सम्पर्क नम्बर उपलब्ध गराएको छ ।
यसैगरी अन्य विभिन्न कार तथा बाइक कम्पनीहरुले पनि सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट यसको जानकारी दिइरहेका छन् ।
व्यवसायी घिमिरेको एसजी ग्रुपले चीनबाट अक्सिजनलगायतका स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउने
मुलुकमा कोरोना संक्रमणको जटिलता दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा संक्रमितहरुको...
बैशाख १६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा, यातायात बन्द हुने
काठमाडौँ – काठमाडौँका तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको...